Guusha Xisbiga Dimuqraadiga Shacbiga SoomaalidaI Ee Doorashadii 2007. - Cakaara News
Guusha Xisbiga Dimuqraadiga Shacbiga SoomaalidaI Ee Doorashadii 2007.
Jigjiga(CN) Talaado.June.23.2015, caawa ayaa markii ugu danbaysay uu ku dhawaaqay bordhiga doorashooyinka qaranku natiijadii guud ee doorashada 5aad ee dhawaan ka qabsoontay dalka.
Bordhiga ayaa caawa cadeeyay guud ahaan in uu XDSHSI ku guulaystay 273 heer deegaan iyo 24 heer fedrraal oo ah kuraasta xildhibaanada baarlamanka, iyadoo ay doorashadii tan kahoraysay ee 2002 tirsiga dalka ay xildhibaanada xisbigu ahayaaeen 186 kasoo baxaysay 52 degmo.
Balse doorashadan 2007 ayaa waxaa kamida guulaha waawayn ee xisbiga u soo hoyday kasakow guusha doorashadan in markii ugu horaysay ay u soo baxaan 87 xildhibaan oo 16 degmo iyo 4ta maamul magaalo uga soo baxay. Taasoo caawa lagu dhawaaqay guusha xildhibaanadaasi ee sharciga ah.
Hadaba gudiga fulinta iyo golaha dhexe ee XDSHSI oo ay ugu horeeyaan afhayeenka baarlamanka ahna gudoomiyaha xisbiga mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxay dhamaan taageerayaasha dal iyo dibad ugu hanbal yaynayaan guusha natiijada doorashadii oo kusoo beegantay bisha barakaysan ee Ramadaanka.
Hadii aan eegno doorashadan 5aad waxay ahayd doorashadii ugu horaysay ee ugu nabada iyo xasiloonida badnayd marka laga eego dhanka nabadiidka iyo xasiloonida, waxayna u dhacday habsami u socod aad u wanaagsan bilow ilaa dhamaad.
Doorashadan ayaa kusoo beegantay:-
1- xili uu deegaanka kahana qaaday horumar islamarkaana lasugay nabadii iyo xasiloonidii deegaanka.
2- xili uu xidhiidhka dadwaynuhu meel sare gaadhay gaar ahaan dibada.
3- xili ay deegaanka ka hana qaaday dawlad ka go'anaansho leh islamarkaana hirgalisay horumar, nabadgaliyo iyo maamul suuban.
4- wakhti uu xisbigu u xushay baarlamanka 91 dumar ah iyadoo hada kahor ay ahaan jireen 2 ilaa 3 kaliya.
Dhanka kale waxaa ay doorashadani kaga duwan tahay kuwii hore sida habsamida iyo nabada leh ee ay u dhacday, saamiga dumarka ee kuraasta baarlamanka, wakhtiga doorashada oo deegaanku ka dib dhici jiray balse tan ay isku mar dhacday, iyo doorashadan oo ay markii labaad kusintay xukuumad uu shacabku u ogaaladay kadib markii ay latimid ka go'naansho iyo daacadnimo wax qabad leh.
Iskusoo wada duuboo gudiga doorashooyinka qaranka ayaa caawa shaaca ka qaaday natiijadii doorashadii 5aad ee dlka oo ay guul taariikhi ah ka raacday xisbiyada talada dalka haya ee EPRDF oo ku guulaystay 500 oo kuraasta baarlamanka ah iyo XDSHSI ee DDSI oo ku guulaystay 273 heer deegaan ah iyo 24 heer federaal ah kuraasta baarlamanka.